Kpaa nkata ka anyị kwuo okwu
Kpaa nkata ka anyị kwuo okwu.
Video nkata Ka anyi kwuo okwu sonyere!
Gaa ikori nkata ka ayi kwuo, nka bu nkata vidio, ebe otutu ndi mmadu n’eji ekwuputa igwe okwu na igwe okwu mgbe nile, soro anyi.
Ọ bụrụ na onye na-ekwuchitere gị na mkparịta ụka ederede zigara foto nke duhiere gị ma nwee obi abụọ na ọ bụghị ya, kama ọ bụ onye dị iche (ọ na-abụkarị ụmụ agbọghọ na ụmụ okorobịa na-etinye foto nke ụdị ejiji, ndị na-eme ememme na ọbụna ndị ha maara), wee mara mma nke ukwuu. nkata vidiyo ga-abụrụ gị ihe ngwọta Ka anyị kwuo okwu
I leela anya n’ebe onye ohuru no, leruo anya n’anya ya ma muo ya ọnụ. N’adịghị ka mkparịta ụka ederede, nkata vidiyo agaghị ekwe ka onye na - egbochi gị gha ụgha, n'ihi na ị ga - ahụ mmetụta ya niile ozugbo na ihu ya. Na nkata vidiyo a, ị ga - enwe ike ịkparịta ụka, na - eme onwe gị ihe ọ bụla, na - agbagharị onwe gị, zipu nsutu ikuku na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Gosiputa kwa ekike ọhụrụ gị, gụọ uri nke ihe mebere gị ma ọ bụ bụọ abụ, gosi ihe osise gị, wdg.
Ka anyi kwuo
Mkparịta ụka nwere abamuru abụọ. Ọ bụrụ na ị naghị enwe mmasị na onye ị na-agwa okwu, malite ịkpa àgwà na-ekwesịghị ntụkwasị obi, jiri okwu rụrụ arụ na okwu a gwara gị mee, mgbe ahụ ị nwere ike ịgbanwe ibe gị n'enweghị mmetụ, dị ka mkparịta ụka ederede, nkata vidiyo ka anyị kwuo okwu ga-enye gị ohere ịbịaru nso na obere oge kachasị mma. ya na onye ị masịrị, n'ihi na ebe a na-eme nkwukọrịta, ị nwere ike ikwu na ị dị ndụ. Mmekọrịta gị ga-amalite ngwa ngwa, n'oge na-adịghị anya ị ga-ezute na ndụ n'ezie, mana ọ ga-abụ akụkọ dị iche kpamkpam!
Kpaa nkata ndụ vidio na-enweghị ndebanye
Okwu nkata na-agaghị echefu echefu
nkata vidiyo na YouTube star Ivangai
Nkata Onye ya na nkata na-amaghị ama!
Chat Nọrọ anyị abụọ na-akparịta ụka na-enweghị aha!
1 Ikwu banyere nkata vidio Ka anyị kwuo okwu sonyere anyị!
Tupu ịmalite mkparịta ụka, ịkwesịrị igosipụta okike gị, wee họrọ n’uche ụdị okike ịchọrọ ịgwa ya. Mgbe ahụ, a pịrị bọtịnụ “Chọọ” ahụ onye mbụ na-egosipụtakwa na ihuenyo dị elu. Na ihuenyo nke ala ị ga-ahụ foto gị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ka gị na onye ọzọ kparịta ụka, pịa bọtịnụ “Ọzọ”. Enwere ike ịgbanwere ozi na windo pụrụ iche n'akụkụ aka nri nke mpaghara site na idobere ma ọ bụ nụ ụda thema Ọkwa. Nwekwara ike ịhụ mmadụ ole n’otu oge na-ekwurịta okwu na saịtị a
Uru nke nkata vidio Russia “Ka anyị kwuo okwu”
Ọrụ a nwere ọtụtụ uru: ikike ịme ndị enyi ọhụụ. Ikwere na imeta ndị enyi ọhụụ na-atọ gị ụtọ mgbe niile. ohere ob ugh i nan i ikwur ita okwu ma obu ede ede, kamakwa itughari uche na onye na - eme ntaneti okwu. Ikwesighi inwe mmechuihu na-adighi nma na nzuko ozo di n'ihu, n'ihi na a na-eme ka nkwurita okwu bie ndu. ịdị mfe na iji ya mee ihe. Igwe vidiyo vidio dị na "Ka anyị kwuo okwu" na - arụ ọrụ na mmekọrịta nwoke na nwanyị na - abụghị nwoke ma ọ bụ nwanyị, yabụ ọ bụrụ na n'ihi ihe ụfọdụ, mmadụ anaghị enwe obi ụtọ na ị, ị nwere ike ịga n'ihu na-achọ ndị ị na-agwa okwu site na ịpị bọtịnụ “Ọzọ”. enweghi mkpa maka ndebanye na data nkeonwe. Eziokwu a na - eme ka usoro maka ịmara ọrụ ahụ dịkwuo elu ma na - eme ka mmalite nke iji rụọ ọrụ, na mgbakwunye, ọ na - adọta ndị ọrụ ndị ọzọ na - enweghị mmasị itinye oge na ụdị usoro a.
Onye nọ ọdụ na nkata vidiyo na-amaghị aha "Ka anyị kwuo okwu"
nkata vidiyo mpụga ọzọ
adịghị enye ihe kpatara ị ga-eji soro onye ọ bụla nọ na-akparịta ụka, ebe ọ bụ na mgbe ị na-akparịta ụka ị nwere ike izute ndị okenye na ndị mmadụ zuru oke dị njikere maka ndị ha maara, mkparịta ụka banyere ọdịmma na, ikekwe, maka ọmarịcha pranks. Ọ bụ ya mere nkata vidiyo ahụ "Ka anyị kwuo" ji bụrụ ihe a ma ama n'etiti ndị nọ n'afọ ndụ na nwoke na nwanyị. Ọtụtụ ndị ọrụ ghọtara ogologo oge na mkparịta ụka vidiyo Russia "Ka anyị Kwuo" bụ ọrụ dị mfe, adaba ma dị mfe nke na-enye nnukwu ohere izute ndị na-ejighị ya mee nke a n'okporo ụzọ, n'ụlọ mmanya, cafes na ebe ọha na eze. Iji saịtị yiri, ị ga-enwe ohere iji gosipụta ihie ụzọ, mee ka onye gị na ya na-akparịta ụka nwee mmasi ma chọta onye ọlụlụ. Dị ka nkata vidiyo ahụ "Ka anyị kwuo" ụmụ agbọghọ na ụmụ nwoke - ndị niile dị njikere iwere ntakịrị ihe ma nye nhọrọ maka ememme ahụ. Ebumnuche nke ndị ọbịa niile dị iche, mana anyị enweghị obi abụọ na na ọrụ anyị ị nwere ike izute ndị ị hapụrụ n’ime ndụ gị, na, ikekwe, n’obi gị.Ọ bụrụ n’ịgha mba, ma ọ bụrụ na ọnọdụ adịghị, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchụ mfe ma ọ bụ nkwuputa obi eziokwu, nweere onwe gị ịga nkata anyị! Kwere m: Ndụ gị ga-atọkwu ụtọ!
roulette nkata mkparịta ụka: nkata n'efu
bụ nnukwu uru maka mmadụ ọgbara ọhụrụ. Ndụ anyị dị mgbagwoju anya ma mgbe ụfọdụ, na mgbakwunye na nkwukọrịta asụsụ mebere, enweghị ohere ọzọ ka gị na ndị ọzọ kparịta ụka, kparịta ụfọdụ okwu, yana naanị ịkekọrịta ihe dị n'ime. Atụmatụ nkata vidiyo nke Roulette na-enye gị ohere ịchọta onye na-etinye ọnụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa ma jupụta oghere ndị dị na nkwukọrịta ahụ na ọfụma. Kwupụta nkata vidiyo mgbe ọ dị gị mma ma dị gị mkpa!
Okwu ohuru “nkata”: gini bu isi ihe?
Want chọrọ ịma ihe na-adọta ọtụtụ mmadụ n’okwu ọhụrụ a? N’ezie, ihe niile dị mfe ma doo anya:
Obi uto nke
ya na ndi mmadu nwere mmasi;
, na-enye gị ohere ịmepụta echiche nke nkwukọrịta onwe gị na bench ma ọ bụ na tebụl kafe;
tozọ iji nọrọ n’oge ntụrụndụ gị na-atọ ụtọ ma bụrụkwa ihe na-adọrọ adọrọ;
ikike ichota ihe di iche-iche gbasara ihe ichoro - onye huru fim ma obu akwukwo, isiokwu ndi ozo.
Videochat Roulette na-akpọkọta puku ndị ọrụ, nke a bụkwa uru ya kachasị. Na mgbakwunye, nkata a nọ na ọkwa ebe mmepe na-eme kwa ụbọchị, yana ihe ndị a niile na-eme ka nkwukọrịta ghara ịdị na-enweghị ụcha na enweghị ụcha, kama ọ bụ ezigbo, ndụ ndụ, ọtụtụ. Na mkparịta ụka vidiyo nke Roulette ị ga-enwe ike ime ka mgbede mgbụsị akwụkwọ dị mwute mgbe mmiri na-eche na asphalt na mpụga windo, ọnọdụ ahụ na-agakwa ngwa ngwa na efu.
, mkparịta ụka, mkparịta ụka ...
Popularity nke Roulette - mkparịta ụka vidiyo na aha a - amaraworị akara nke usoro nkwukọrịta a. N'ọtụtụ ụzọ, kompeni nke ọha mmadụ anyị, ntanetị nwere ike ịnweta, na ngbanwe nke mesiri ike na-arụ ọrụ. Igwe nkata na-enweghị nkata bụ ọ joyụ maka introverts, mana ndị hụrụ ya n'anya na-ekwu otu ihe ahụ ruo chi ọbụbọ
: Mfe ojiji nke ikori bụ mgbakwunye dị iche. Yabụ, ịmalite mkparịta ụka, ịkwesighi ịga usoro usoro ndebanye aha ogologo, nke a bụ naanị ihe ịtụnanya. A na - enweta Chatroulette ozugbo n'efu, ị nwere ike ijikọ ya na onye na - akpọ interlocutor ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'otu ntabi anya. Ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ na-eto kwa ụbọchị, nke a na-amụba ohere iji zute onye na-atọ ụtọ ma nye onwe gị mkparịta ụka mebere ogologo oge.
mụ na onye njem ibe
A maara nke ọma na njem ụgbọ oloko na-abụkarị ihe dị mkpa, nke a abụghịkwa ọghọm: onye na-eje ozi dị ka ụdị “vest” na-ege ntị n'eleghị mmadụ anya n'ihu, na-enye ndụmọdụ ndụmọdụ ma na-enyere aka ikpebi n'ọnọdụ ndụ siri ike. Chatroulette bụ ụgbọ ala awara awara na-anya, onye na - anọchite anya gị bụ otu ahụ.
Mma nke nkata free Roulette bụ na onye ọ bụla nwere ike iji ọrụ ya niile. Ọ baghị uru ịbụ onye ọrụ ntanetị dị elu iji mụta iwu nke nkata Roulette. Mgbanwe site n'otu ọrụ gaa n'ọzọ na - eme ngwa ngwa na enweghị mgbochi ọ bụla, nke pụtara na ọtụtụ na - etinye aka na ụdị nkwukọrịta a.
Society, nke kewara site na usoro nke otu ma ọ bụ nke ọzọ n'usoro ya, mgbe ụfọdụ na-edobe ụkpụrụ siri ike. Ọ dị mma, ikarịta ụka na vidiyo na-enye gị ohere ịgọnahụ nnọkọ mmekọrịta niile dị adị wee bụrụ ihe ịchọrọ. Shy na bụrụkwa, nke na-egbuke egbuke ma na-adịkarị nkọ, nke amamihe na nke na-enweghị oke - anyị niile bụ ndị agụụ na-agụ maka mkparịta ụka ma chọta mkpụrụ ha n'ime ya. Na Russia taa, enwere ọtụtụ mmadụ dị njikere ikwurita ụka n'ụzọ dị otú a ma na-achọta ọtụtụ n'ime onwe ha.
Jiri nke Chat Roulette maka n'efu na-ekwe omume ugbu a, egbula oge!
Mkparịta ụka vidiyo mkpakọrịta nwoke na nwanyị nke
bụ oge ịgbanwe ndụ gị ma bido iso ndị si mba dị iche na-akparịta ụka kwa ụbọchị. Mkparịta ụka vidio maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị ga-abụ ihe nchọpụta dị mkpa, bụrụkwa ụzọ ga-adị mkpa maka ụwa ọhụrụ, na mkpakọrịta nkata site na nkata vidiyo ga-abụ ụgwọ ọrụ maka obi ike.
Mmadu na-ebi uwa nke ikwurita okwu mgbe nile. Ma otu mgbe ọ bụ oge ezughị ma ọ bụ onye ziri ezi ị ga-ekwu maka ọnya. Ugbu a nsogbu niile dị otu a ga-edozi ozugbo! O zuru ezu iji ọrụ mkparịta ụka mkparịta ụka Russia na throughntanetị iji chọta onye interlocutor mara mma na naanị ikwu okwu
Eziokwu ọhụụ nke narị afọ iri nke atọ - ụlọ nkata vidiyo n'ịntanetị. Mkparịta ụka n'oge ọ bụla n'ụbọchị ga-enye ọ everyoneụ onye ọ bụla na-achọtabeghị usoro nkwukọrịta ha. Mkparịta ụka vidiyo dị ndụ maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nọ n'afọ ndụ dị iche iche na mmekọrịta ọha na eze - ọhụụ na World Wide Web
Vidiyo nkata vidiyo bụ ọrụ na-atọ ụtọ ma bara uru nke ga-enyere gị aka ịgakwuru onye na-emekọrịta ihe na-atọ ụtọ ma na-etinye oge ntụrụndụ gị na-ahapụghị ụlọ gị. Mkparịta ụka Roulette na-enweghị ndebanye aha na-enye gị ohere ịmalite nkwurịta okwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo. Gị onwe gị na-ekpebi oge mmekọrịta ọhụrụ na ị gaghị eburu ụgwọ ọ bụla nye onye gị na ya na-akparịta ụka. Basickpụrụ bụ isi nke vidiyo vidiyo bụ nchọta na-akpaghị aka maka onye na-emekọrịta ihe kwesịrị ekwesị. Oge vidiyo ọ bụla bụ ihe pụrụ iche na iche iche!
Mmadu ole n’ime anyi puru ịpu n’èzí, zute mmadu, me enyi, ma obu inwe mmekorita? Ederede akụkụ! Mana ihe niile na-agbanwe mgbe anyị na-aga n’ịntanetị. N'ebe ahụ, n'okporo ụzọ mara mma, anyị nwere ike izute onye ọdịmma ya na nke anyị. Maka ndị hụrụ naanị ikarịta ụka, enwere nkata.. ! .
,. ,,, -! ? .
? ,, -. ,,,. ,,. ,,. . ?
,. ,,,. ,,, - - .
? ,,,. .
ChatSpin. ,.Iji malite mkparịta ụka, ị ga-eme naanị otu pịa ma gbanye kamera weebụ gị. Na mgbakwunye, ị ga-ahụ ọtụtụ ọrụ bara uru na ngwaọrụ ndị ga-enyere gị aka ịnwe nkwukọrịta n'ogo ọhụụ ma mee ka nkata vidiyo na-atọ ụtọ ma bụrụ ihe na-adịghị ahụkebe!
Olee ihe pụrụ iche?
Nzacha maka igwefoto
Họta otu n’ime ọtụtụ nzacha na nsonaazụ, na-eme ka usoro isoro ndị bịara abịa na-ekwurịta okwu si bụrụ ihe doro anya ma na-atọkwa ụtọ.
Nhọrọ nke mmekorita nwoke na nwanyị
Naanị soro ndị ụmụ nwanyị na-akparịta ụka site na ịhọrọ nhọrọ dabara adaba n'elu mpio nkata.
Soro n’etiti ndị ọrụ si n’otu steeti, yana ndị na-asụ asụsụ gị.
Dị mfe dịka nke ahụ
I gha acho ime , narika imeghe . ịmalite iji onye gị na-amabughị na-eji kamera weebụ gị akparịta ụka. Na mgbakwunye, ị ga-enweta ọtụtụ narị ọrụ dị iche iche na ngwaọrụ ga-eme ka mkparịta ụka gị ọbụna bụrụ ihe na-atọ ụtọ na ihe pụrụ iche!
Gbanwee ụda olu na olu kamera weebụ gị, kọọkwa olu olu onye ị na-agwa okwu.
Ọnụ nkata anyị dịrịrị maka onye ọ bụla na onye ọ bụla nwere onwe ya kpamkpam.
Anyị anaghị arịọ nkọwa kaadi kaadị gị ma ọ bụ nkwenye ịkwụ ụgwọ. Nwere ike iji ChatSpin na-enweghị ịdenye aha. Usoro a na - enyere gị aka idobe nzuzo gị mgbe gị na ndị ị na - amabughị na-akparịta ụka vidiyo, na - enye ndị mmadụ ihe nzuzo. Gaghị enwe ike ịnye ozi gbasara gị dịka nọmba ekwentị ma ọ bụ adreesị ụlọ. Na mgbakwunye, anyị na-akwado ike ka ndị ọrụ anyị ghara igosipụta ozi dị otú a na nkata, n'agbanyeghị onye gị na ya na-ekwu okwu.
Bido mkparịta ụka ugbu a
Ihe obula di nfe. Ọ ga-ewe gị obere oge iji bido iso ndị ọbịa 97,009 ndị bịara wee hụ gị okwu!
Russian chat roulette iji kparịta ụka na Internetntanetị
Here ị ga - ahụ oke osimiri nke nkwukọrịta n'ịntanetị maka ịhụnanya ma ọ bụ ọbụbụenyi. Ọ bụ ndị ji oge akpọrọ ihe, ndị toro ogologo ndụ ha na ntanetị ka ana-ahụ ndị maara vidiyo. Mkpa nkata n'ụwa niile na-eme ka ọdịmma dịrị n'otu ma bụrụ ihe a na-ewere dị ka otu n'ime ụzọ kachasị mfe, kacha ọsọ na nke kachasị adaba iji mara ibe gị.
Free nkata mkparịta ụka n'ịntanetị na-enweghị ịdenye aha
Mgbe ịdị mma nke ndị ọrụ, ị nwere ike isoro anyị kparịta ụka n’enweghị ndebanye aha, banye na akaụntụ gị na netwọk mmekọrịta. N'ebe a, ị ga - ahụ naanị mkparịta ụka dị mma na ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị! Mkparịta ụka nkata nke roulette ga-amasịkwa ọtụtụ mmadụ site na njiri mara mma ya, interface ndị ọrụ na-arụ ọrụ yana arụmọrụ buru ibu.ru
Iji ọrụ dịka Video chat na onye na-enweghị uche, ịnwere ike iso mmadụ kwurị site n'akụkụ ọ bụla nke ụwa anyị n'iji kamera weebụ na ozugbo. Ihe ngosi ihe ohuru a dọtara ndi n’eme ihe omume a n’ihi ihe ọhụrụ ya, ebe ọ bụ na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịgwa mmadụ si n’obodo ọzọ ma ọ bụ obodo ọzọ.
Site n'ụzọ, edeburu m akwụkwọ banyere isiokwu yiri ebe a:
Iji jiri ụfọdụ mkparịta ụka vidiyo, a na-akpọ gị ka ị debanye aha gị, nke ga-ewe nkeji ole na ole nke oge gị. Mgbe ị debanyere aha, ị nwere ike ịnụ ụtọ iji mkparịta ụka na ntanetị igwefoto na-enwe mkparịta ụka!
video4at.ru Russian video nkata roulette
Kachasị nkata vidiyo TOP http://video4at.ru. Enweghị mgbasa ozi. Enwere ụdị adịchaghị. Nwere ike ịhọrọ ndị na - anọchite anya obodo site na obodo. Agaghị m ekwu na ị nwere ike ịzụta koodu ebe ahụ ma nye mmadụ ohere ịnweta
Enwekwara mkparịta ụka ederede na nnukwu nchịkọta profaịlụ na ụmụ agbọghọ.
Kazakhstan na-akparịta ụka "GYR-GYR"! Mkparịta ụka vidiyo a dabere na igwe ochie ahụ sitere na mail.ru, etinyere na peeji ahụ. Edere peeji a dịka nkata vidiyo Kazakhstan, mana onweghị onye na-ewute ya ịchọta onye na - esite na Russia ma ọ bụ Ukraine. Window kwesịrị ekwesị nke interlocutor, bọtịnụ mkpu, ihe niile dị ka o kwesiri
Mkparịta ụka a bụ nkata vidiyo ndị Russia na-eme mgbe niile ma bụrụkwa ụzọ nkwukọrịta maka ndị ntorobịa nke oge a. A na-ahazi nkata a naanị. Window abụọ ga-eme ka ị hụ onwe gị na onye na - egbochi gị na ihuenyo nke nyocha gị. N’akuku, enwere windo izipu ozi n’otu ma obu ozigbo ozigbo ozigbo
Ọzọkwa, ị nwere ike mata akara gị na okike, yana okike nke onye ịchọrọ, yabụ ọchụchọ ahụ ga-ejedebe na data ị nyere.
Saịtị a na-enye gị ohere iji nkwukọrịta webusaotu oge n'otu oge n'etiti ọtụtụ ndị na-enweghị ndebanye. Na saịtị a ị nwere ike ịhọrọ avatar gị, gosipụta okike, afọ na obodo. Dabere na otu udua, ị nwere ike bulie onye na - etinye ihe ịntanetị
N’inyela adreesị ozi-e gị na paswọọdụ gị, ị nwere ike ichekwa agwa gị na saịtị ahụ, ma chekwaa kọntaktị na mkparịta ụka ndị dị mkpa.
Ebe a, dị ka mkparịta ụka vidiyo ndị ọzọ, na-enye gị ohere iso ndị ọhụụ na-adọrọ mmasị na-aga site n'obodo ọ bụla na mbara ụwa anyị. Will ga-ahapụ saịtị a ma ọ bụrụ na ikpebie ikwe ka ịbanye na igwe okwu na kamera weebụ nke kọmputa gị. Iji debanye aha na saịtị a, ịchọrọ ịbanye adreesị email gị ma kọwaa paswọọdụ ịbanye, mgbe ahụ ị nwere ike ịhọrọ onwe gị onye na-emekọrịta ihe na-atọ ụtọ.
Saịtị a nwere iwu nke ya, yabụ ịkwesịrị ịmara ha ka ị ghara imebi.
Okwu nkata vidiyo a nwụrụ .. Ngwa a "Nkata vidiyo na nkata enweghị nkata" nyeere gị aka imeta ndị enyi ọhụụ ma ọ bụ nwee ọfụma. Ihe niile achọrọ n’aka gị bụ ijikọ kamera weebụ wee pịa bọtịnụ “mbido”. Mgbe nke a gasị, ngwa ahụ ga-ahọrọ onye gị na ya ga-ebi. Y’oburu na inweghi obi uto ma obu onye obuna, inwere ike iga n’ihu na-acho onye ị na-agwa okwu
Ngwa a enweghị ndị nwere nrụaka, yabụ na nke a, ịgaghị enwe mkpuchi maka ihe nkiri ndị dị mma ilele ndị gbara afọ 18. Dịka ọ bụla dịka nkata niile, ị nwere ike ịgbanwe ozi ederede ozugbo.
Ngwa a nwụrụ, ndị mmadụ na - agbanwe ya na ọrụ ndị ọzọ. Ezubere nkata vidiyo a iji kparịta ụka site na igwefoto weebụ. Enweghị ihe ọ bụla - windo abụọ maka mgbasa ozi vidiyo, windo maka izipu onye na - akpọ interlocutor, yana ikike ịchọrọ maka interlocutor ọhụrụ. Ebere dị mfe ma dị mfe iji ma ọ dịghị achọ ntinye akwụkwọ maka
- roulette, na-enye gị ohere iso ndị ọhụrụ kparịta ụka, na-ahapụghị ụlọ gị. Mgbe ịdebanye aha na saịtị ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite mkparịta ụka site na ịpị bọtịnụ "chọọ onye na-etinye oge". Yabụ na saịtị a, ị nwere ike ilele profaịlụ vidiyo nke onye ọrụ, nke ga-eme ka nhọrọ nke onye na - anọchite anya gị dị 9774
Onweghị ihe dị egwu na saịtị ahụ, ndị mmepe ahụ agbalịrị ime ka nkwukọrịta gị bụrụ nke kachasị mma ma na-atọ ụtọ.
Ọrụ a, ọ dịkwa nwute, kwa, abanyela na mbibi. Emere saịtị a n'asụsụ Bekee, yabụ, ndị ọrụ na-enweghị ihe ọmụma banyere asụsụ bekee ga-esiri gị ike ịghọta ngalaba nke nkata vidiyo ahụ. Mkparịta ụka vidiyo, dị ka ihe niile, na-enye gị ohere ịgbanwe ozi ederede, yana ịhụ interlocutor na ozugbo.
“Ka anyị kwuo okwu” nkata vidiyo na-enye gị ohere iso ndị bịara abịa zuru nkata n'akụkụ ụwa ọ bụla. Enwere ike iji nke a mee ihe site na iji nkata, igwe okwu ma ọ bụ kamera weebụ. Ọrụ saịtị a dị nfe, ọ naghị achọ ndebanye na ntọala nkata ọzọ
licpị bọtịnụ “chọta onye na - etinye ọnụ” ị nwere ike ịmalite mkparịta ụka. Ọzọkwa, "Ka anyị kwuo okwu" na-enye nkwukọrịta na ndị ọrụ Vkontakte, mana maka nke a, ị ga-edebanye aha gị. Atingkparịta ụka na saịtị a bụ nnọọ mfe ma dịkwa ụtọ!
Mkparịta ụka a bụ analogue nke Russia nke nkata roulette, ọrụ kachasị ama maka mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ngwa ngwa. Ọ bụghị ihe dị mma ịdebanye aha tupu ịmalite mkparịta ụka, yana, ọ bụrụ na ịhapụghị ịnweta igwe na kamera, ị ga-ahapụ saịtị a.
N’ozuzu, nkata dị mfe ma dị mfe iji, enweghị ihe na-enweghị atụ na saịtị ahụ, yabụ onye mbido nwere ike ịchọpụta ngwa mkparịta ụka roulette dị mfe.com
,. , 20 Nke na-esote. . ,. ,,. .
Chatroulette P.,. , -!
Mkparịta ụka Roulette, P. . .!
,,. ,,,. ? !
, 21-. :,; ,; ,; ,. ,,,.Enweghị mkpa ịwụnye mmemme ahụ, naanị tinye ajụjụ gị na ogwe ọchụchọ nke ihe nchọgharị ahụ:
maka mmadụ 18.
Mkparịta ụka vidiyo na-amaghị aha 9700 maka mmadụ abụọ,
maka mmadụ abụọ na-enweghị ndebanye,
Nkparịta ụka vidiyo
n'efu maka mmadụ abụọ,
chat na-enweghị ndebanye n'efu,
kparita ụka na kamera weebụ n'efu,
chat ya na umu nwanyi Russia